Inona avy ireo fomba leakage ny peratra famehezana? Nahoana no misy leak?-CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co., Ltd
Inona avy ireo fomba leakage ny peratra famehezana? Nahoana no misy leak?
Fotoana: 2021-11-25 Hits: 7
Misy karazana vokatra peratra tombo-kase maro eny an-tsena, izay ampy hampitolagaga ny mpividy. Misy karazany maro sy kalitao tsy mitovy. Mifidy peratra tombo-kase vokatra ratsy kalitao voajanahary
tsy afaka mitondra antsika ny vokatry ny famehezana andrasana. Na ny fitaovana sy ny raikipohy dia tena zava-dehibe amin'ny kalitaon'ny peratra famehezana.
Ny vokatra peratra famehezana tsara kalitao dia matetika manana endrika mamirapiratra sy madio tsy misy adhesion, bubbles, burrs, sns., ary tsy misy ny tsy fahampian'ny fitaovana na ny fahasimbana amin'ny kalitao, ary ny habeny dia tokony
mahafeno ny fenitra sy ny filan'ny mpampiasa ihany koa. Ny fisafidianana peratra tombo-kase tsara kalitao dia afaka manampy betsaka ny mpampiasa hampihena ny mety hisian'ny leakage. Ity votoaty manaraka ity dia mamaritra amin'ny antsipiriany ny peratra tombo-kase mahazatra
fomba leakage sy ny antony mahatonga ny leakage:
Mizara ho karazany efatra ny fivoahana mahazatra amin'ny peratra famehezana: leakage interface, leakage fidirana, leakage diffusion, ary leakage manimba.
Leak ny interface
Noho ny tsy fahampian'ny fanerena ny gasket, ny tsy mety smoothness na deformation ny interface fifandraisana ambonin'ny dia hahatonga ny sasany leakage eo amin'ny famehezana interface tsara.
Satria ny fitaovana malefaka dia matetika fibre, mora miditra amin'ny mpanelanelana izy ireo, indrindra eo ambanin'ny hetsika fanerena. Noho ny trangan-javatra capillary, ny mpanelanelana dia hiditra ao amin'ny
lafiny tsindry ambany, noho izany dia hisy leakage fidirana.
Ny diffusion leakage dia manondro ny fivoahana vokatry ny famindrana fitaovana amin'ny mpanelanelana amin'ny alàlan'ny elanelana famehezana na ny fantsona capillary amin'ny fitaovana famehezana eo ambanin'ny impetus ny fifantohana.
fahasamihafana. Ny diffusion dia vokatry ny fihetsiky ny molekiola ary matetika dia tsy fomba tokana. Ao amin'ny fanjakana izay ny fahasamihafan'ny tsindry famehezana dia tena kely na ao anaty banga, dia ilaina ny mandoa
ny fiheverana manokana ny fisian'ny karazana leakage roa, toy ny fidirana sy ny diffusion, ho an'ny zavatra mora permeable toy ny azota sy ny hydrogène, ary ny akora misy poizina sy radioaktifa be.
Ny fahasimbana mitete
Ny tontolon'ny fiasan'ny faritra famehezana dia somary henjana, ny deformation mafana dia somary lehibe, ary matetika iharan'ny vibration, fiantraikany, fametrahana tsy mety, hery manenjana be loatra, miverimberina.
ny fampiasana, fiovaovan'ny compression, fifantohana amin'ny adin-tsaina anatiny, fahasimbana mihoatra ny tanjaky ny harerahana, ary ny fahanterana ara-nofo Ny toe-javatra toy ny, fahasimbana, sns. Matetika ny leak toy izany
matotra kokoa, ary ho lehibe kokoa ny fiantraikany. Ilaina ny fanamafisana ny fisorohana.
Next: Ny zava-dehibe manaraka amin'ny fanitarana ny tsena PTFE